देशको नाम चम्काउदै बालक प्रितम आचार्य , जजको पाए यस्तो तारिफ ( भिडियो सहित )
Home जिबनशैली देशको नाम चम्काउदै बालक प्रितम आचार्य , जजको पाए यस्तो तारिफ ( भिडियो सहित )
March 24, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, Leaveacomment
भारत को चर्चित शो सारेगामापामा पछिल्लो समय नेपालका २ बालक हरुले धमाका मचाउदै आएका छन्। आफ्नो गायन क्षमताकै कारण उनीहरुले गयको उत्कृस्ट गीतका कारण उनिहरुको प्रसंसा हुदै आएको छ। भारत कै ठुलो रियालिटी शोव मा टप १५ हुदै अघि बढी रहेका उनीहरु बलियो प्रतिस्पर्धी साबित भैसकेका छन्। नेपाल जस्तो सानो देश बाट भारत जस्तो अरबौ जनसंख्या भएको ठुलो देशमा पुगेर आफ्नो दबदबा कायम गर्नु आफैमा सानो कुरा भने हैन। यसै क्रममा सरेगमपामा प्रितम आचार्यले पनि आफ्नो क्षमताकै कारण अब्बल साबित भएका छन्।
विभिन्न रियालिटी शोव मा आफुलाई उभ्याई सकेका र जिती सकेका प्रितम अहिले सरेगमपामा प्रतिपर्धिलाई टक्कर दिरहेका छन् भने नेपालको नाम समेत उच्च गर्दै अघि बढिरहेका छन्। आफू मात्रै हैन देशलाई नै चर्चमा ल्याएका उनको प्रसंसा हुदै आएको छ। नेपालका इटहरी निवासी प्रितम आचार्य पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन् । उनी चर्चित भारतीय रियालिटी शो सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स २०१९ भाग लिँदै नेपालको नाम उच्च राख्न सफल भएका छन् ।
नेपालको ईटहरीमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दै आएका प्रितम आर्चायले यति बेला भारतमा आफ्नो स्वरको जादुको कारण तहल्का मच्चाइरहेका छन् । जि टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको चर्चित भारतीय रियालिटी शो सारेगामापा लिटिल च्याम्प्समा यस हप्तापनि प्रितम आर्चायले अफ्नो प्रस्तुती दिए जहाँ उनको गायनको तारिफ जजहरुले खुलेर गरे। उनको गायक सैली लाइ अब्बल मान्दै संगीतकार हिमेश रेसमियाले हदै सम्मको तारिफ समेत गरे। हेर्नुस भिडियोमा
Pritam's performance will gave you major nostalgia! Watch #SRGMPLilChamps, Sat-Sun,9PM.Shaan The Richa Sharma Amaal Mallik Ravi Dubey Himesh Reshammiya #MusicSeBadhengeHum
Geplaatst door ZEE TV op Zaterdag 23 maart 2019
सबैभन्दा चलाख र होशियार हुन्छन यी ५ राशिका मानिसहरू !
गरिब बाबुको पिडा ! छोरा काखमा च्यापेर रुँदै –‘मेरो छोरा ब्लड क्यान्सरले मर्नै लाग्यो - सहयोगको अपिल
आज चैत्र १० गते आइतबार कुन – कुन राशि भएकाहरुलाई शुभ ! हेर्नुस आजको भबिस्यबाणि
एसइइ तयारीमा ६७ बर्षकी युगमाया, रबि लामिछाने संग बिशेष अन्तर्वार्ता ( भिडियो )
भ्रष्टाचार विरुद्ध कर्ण श्रेष्ठ गर्दैछन् साइकल यात्रा